Tompony ny sehatra misy anao! | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 8, 2007 Talata, Aprily 5, 2016 Douglas Karr
Iray amin'ireo fiasa vaovao an'ny Bilaogera dia ny ahafahanao mampiantrano ny rindranasa amin'ny sehatra misy anao. (Tsikaritro fa manolotra ny fidiran'ny kaonty Google anao amin'ny sehatra vaovao koa izy ireo. Tsara izany). WordPress dia nanolo-tena hampiantrano ny bilaoginao, hampanjifa ny lohahevitrao, hanampy plugins, sns. mandritra ny fotoana kelikely. Mino aho fa izany no iray amin'ireo antony lehibe isafidianako ny WordPress… Te hanana ny fanjakako aho.
Ny olana amin'ny fanombohana ny bilaoginao ary amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo sehatra marobe, VOX, typepad, mpitoraka blaogy, na WordPress, dia ny fanananao ny fifamoivoizana fa tsy ianao. Miantehitra amin'ny mpizara azy ianao, miova ny sehatra, ny fotoanan'izy ireo, ny zava-drehetra! Ny hany fehezinao dia ny feonao.
Tsy olana lehibe izany raha te hitazona diary any fotsiny ianao. Saingy manova ny sainao any an-dàlana ary manapa-kevitra fa te ho matotra amin'ny fanaovana bilaogy ianao, angamba mahazo doka, sns. Tafahitsoka ianao… ny motera fikarohana lehibe rehetra izao dia misy ny feonao (atiny) voatanisa ao amin'ny tranonkalan'ny olon-kafa. Midika izany fa azy ireo ny fifamoivoizana fa tsy ianao.
Ary inona no mitranga raha mankaleo izy ireo? Ahoana raha lasa mampihoron-koditra ny fahombiazan'ny mpizara na rindrambaiko ka ilainao ny mandao azy ireo. Soa ihany fa afaka mandray ny hafatrao ianao, indrisy, tsy afaka mandray ny fanondroana ny motera fikarohana ianao. Afaka mamela anao any aoriana mandritra ny herinandro sy volana maro ianao eo am-piandrasana ny rehetra hanondro ny tranokalanao sy hanavao ireo referansa rehetra momba ny tranokalanao. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia namindra ny tranokalako tany amin'ny kaonty hafa aho, ary ny rohy sy ny valin'ny fikarohana nataoko dia mandeha foana toa ny taloha. Azoko atao ihany koa ny manolotra soso-kevitra hampiasa rafitra rohy maharitra ka raha mifindra amin'ny sehatra hafa ianao dia afaka mitazona ny rafitry ny rohy.
Ny torohevitro ho an'ireo bilaogera vaovao?
Tompony ny sehatra bilaoginao! Aza avela hisoratra anarana ho anao aza ny 'teknolojia' anao. Mila manana azy ianao, mila manavao azy, mila manara-maso azy io. Ny fanananao sehatra dia toy ny fanananao ny adiresinao eny an-dalambe, hataonao amin'ny anaran'ny olon-kafa ve izany trano izany? Fa maninona no hataonao amin'ny orinasanao na ny bilaoginao?
Torohevitra momba ny sehatra fanaovana bilaogy ve aho?
Tolotra serivisy mpizara anarana. Io dia hahafahako misoratra anarana amn'ny domaine amin'ny registrar ankafiziko, fa tondroy ny tranokalan'ny anarako. Raha manapa-kevitra ny hamindra ny bilaogiko na ny tranokalako amin'ny mpampiantrano hafa aho dia afaka mamindra ny tranokalako fotsiny ary manavao ny lozisialy anarako. Mety ho maodely 'karama isaky ny fampiasana' koa izany. Hialako ny serivisy fisoratana anarana anarana satria afaka manaintaina ny volo izy ireo ary mila manampy ireo karazana fanohanana sy fampidirana ao amin'ny tranonkalanao ianao. Fa ny fananana mpizara anaran-tsehatra izay manondro ny http://mydomain.com mankany http://mydomain.theirdomain.com dia tsotra.
Tags: sehatrasehatra anaranatompony ny anaranao
Jan 9, 2007 ao amin'ny 8: 59 AM
Ekeko tanteraka ry Douglas. Nahoana no omena ny fifehezana ny votoaty ianao noforonina ho an'olon-kafa?
Tsaroako fa tsy maintsy nandoa $72 ho an'ny sehatra voalohany aho, fa ny vidiny amin'izao fotoana izao dia tsy tena antony tsy hahazoana ny sehatrao manokana. Ary mbola be dia be ny anarana famoronana azo alaina. (Ary ireo dia avy amin'ny fikarohana nataoko iray tolakandro…).
Amin'ny fanamarihana hafa tanteraka, satria manonona modely fandraharahana ho an'ireo mpamatsy sehatra fitorahana bilaogy ianao; Nanontany tena foana aho hoe: ahoana ny fomba ahazoana vola amin'ny WordPress? Fanomezana fotsiny ve izany, ary tena mandaitra tokoa ve izany?
Gaga aho fa ny tompon'ny wikipedia dia mandà tsy hanana doka sora-baventy ao amin'ny tranokalany. Fanajana!
Janoary 9, 2007 amin'ny 2:01 PM
Nandalo fahasahiranana aho noho ny fahatarana tamin'ny fahazoana anarana domaine. Ny antony nividianako ny anaram-pizarako dia satria te hanandrana bebe kokoa aho. Na izany aza, dia nahatsapa ny fanaintainan'ny fihetsehana aho.
Jan 14, 2007 ao amin'ny 11: 30 AM
Misy mahafinaritra lahatsoratra tao amin'ny Shards of Consciousness amin'ny dingana tokony hatao mba hamindra ny blôginao WordPress amin'ny sehatra misy azy!
Jan 15, 2007 ao amin'ny 11: 59 AM
Misaotra anao nanondro ny lahatsoratro, Doug. Mankasitra aho.
Miombon-kevitra tanteraka aho amin'ny fananana ny sehatra misy anao haingana araka izay azo atao raha tsy manomboka amin'ny fanombohan'ny bilaogy. Manokatra safidy maro kokoa ho anao ianao. Ary mihamitombo ny zavatra. Azonao atao ny manomboka manandrana fotsiny mba hahitana raha tianao izany, ka mampiasa sehatra hafa. Saingy raha hitanao fa tianao izany ary maniry fahalalahana bebe kokoa, dia nanasa asa be dia be ho an'ny tenanao sy ireo vokatra hafa noresahinao ianao.